Trump oo saxiixay cunaqabateyn ka dhan ah Venezuela - BBC News Somali
Trump oo saxiixay cunaqabateyn ka dhan ah Venezuela
Image caption Madaxweyne Nicolas Maduro
Dowlada Mareykanka ayaa ku dhawaaqday in cunaqabateyn dhaqaale ay kusoo rogeyso dowlada madaxweyne Nicolas Maduro ee dalka Venezuela. Dowlada dalkaasi ayaa lagu eedeeyay inay ku dhaqaaqday xadgudubyo ka dhan xuquuqda aadanaha iyo dimoqraadiyada.
Madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa saxiixay dikreeto madaxweyne oo lagu mamnuucayo in lala macaamilo shirkadaha ganacsiga ee ay dowladu leedahay. Tallaabadan ayaa saameyn doonta shirkada weyn ee shidaalka ee dowlada Venezuela.
Aqalka cad ee dalka Mareykanka ayaa dowlada madaxweyne Maduro ku tilmaamay mid kali talis ah. Mareykanka ayaa sidoo kale cunaqabateyn kusoo rogay madaxweyne Maduro iyo shakhsiyaad ka ag dhaw.
Safiirka Mareykanka ee Qaramad midoobay Nikki Haley ayaa waxaa ay sheegtay in Washington ay ka go'antahay sidii cadaadis loo saari lahaa dowlada dalkaasi.
Dhanka kale wasiirka arrimaha dibadda ee Venezuela Jorge Arreaza ayaa Mareykanka ku eedeeyay in uu doonayo in dhibaato bani'aadanimo uu ka abuuro dalka Venezuela, waxaan uu ugu baaqay Mareykanka in uusan soo faragelinin arrimaha Venezuela.
Image caption Dibadbaxyada Venezuela
Dibadbaxyadii u dambeeyay ee looga soo horjeedo dowlada dalkaasi oo ka dhacaya caasimada dalka Venezuela ee Caracas ayaa waxaa ku dhintay dad badan kaddib markii ciidamada Booliska ay ku dhufteen sunta dadka ka ilmeysiisa.